Izindlu ze-Flowline Bag Filter Ezezindlu - Umhlinzeki Wezindlu wase-Flowline Bag Filter Ezezindlu, Ifektri -Sffiltech
I-Flowline Bag Filter Ezezindlu
Ukuhlunga kwesikhwama se-Side Flow
Side entry isikhwama esisodwa lemifanekiso yezindlu DS uchungechunge
I-Side Flow inikeza isisombululo esisebenzisana kakhulu nezidingo zezindlu zesikhwama esisodwa. Idizayini yayo eyingqayizivele yomzimba owodwa iqeda umzimba wendabuko ukuba ibambe ongezansi kokujikeleza futhi ihlinzeka ngophiko oluvikelekile, olungadluli. I-Side Flow iyatholakala ngenketho entsha yokuphepha ye-Splash Guard yokuphepha ye-Doctop.
DS uchungechunge concave ikhava single bag lemifanekiso yezindlu iyindawo yokuhlunga yesikhwama esisodwa enefomu lesakhiwo elikahle, umphumela omangalisayo wokubopha uphawu, ofanelekile ukuhlunga okuphakeme, isakhiwo esinamandla amakhulu, ukuphepha okuphezulu, okuhlala isikhathi eside kakhulu.
Umklamo wokuphamba ngokuphelele ocashile, ofanele ukuhlunga okucacile okuphakeme;
Ukubekwa uphawu kweShell kanye nokufakwa uphawu kwesikhwama kungaqedwa ngasikhathi sinye, ukwenza lula umsebenzi;
Isakhiwo sekhava se-concave efanelekile, ukwahlukanisa okuthambile, nokwenza kahle ukwakheka kwekhekhe lokuhlunga;
Umklamo wamapayipi we-Fluid, ukulahleka kwengcindezi ephansi;
Ifakwe nge-flange ejwayelekile, amandla aphezulu, ukuphepha nokwethenjwa;
Umklamo wokuvula okusheshayo, ususe i-nati engavula isembozo, ukulungiswa okulula;
Umklamo wokuqinisa isihlalo se-Nut, akulula ukugoba i-deformation, futhi ungacindezela isikhathi eside i -1.0.MPa;
Kusetshenziswa izinsimbi ezisezingeni eliphakeme zensimbi 304, 316L;
Ukuphakama kokusebenza okuphansi, kulula ukugoba isikhwama sokufaka izingalo;
Ikhwalithi enhle kakhulu yokufisela, iphephile futhi ithembekile;
Ivolumu incane kunalesihlungi se-inlet eseceleni enendawo efanayo, sinciphisa imfucuza yezinto ezibonakalayo;
Ngemuva kokuvula isembozo, imigqa yesikhwama sokuhlunga ikhombisa insalela ye-liquid esele, efanelekile ukukhishwa okuphephile, futhi efanelekile ukugqwala, okushisa okuphezulu nokuphuza okuphezulu kwe-viscosity;
Izinhlobo ezintathu zokusatshalaliswa kokungenisa kanye nokungenisa izinto kwamanye amazwe, ezilungele ukwakheka nokufakwa;
Amandla aphezulu insimbi engagqwali ne-nati, ukumelana nokugqwala, okuhlala isikhathi eside;
Ubakaki wensimbi engenasici, ukuphakama okuguqukayo, okulungele ukufakwa kanye ne-docking;
Ngaphandle kokucutshungulwa kwesihlabathi ukuqhuma kwesihlabathi, kulula ukulihlanza, muhle futhi unesandla esivulekile.
Sinezinto eziningi zokuhlunga zesikhwama sezindlu ezingama-304/316 eziwuketshezi ngamunye esizifisayo ngemininingwane emincane ukuthuthukisa ukulawulwa kwekhwalithi.
1. Sithumele kusuka ngonyaka we-2006, okungaphezulu kwe-10 emakethe yokuthumela ngaphandle, ngakho-ke, sazi kahle isimo sokusebenza phesheya